Karatra Business Wordle! | Martech Zone
Wordle voa ny tontolom-bolongana a mpivady herinandro lasa izay ary ny mpamaham-bolongana efa nitabataba! Wordle dia rindrambaiko Java izay manova ny anao tag cloud ho zavatra tsara tarehy.
noheveriko Wordle milay, fa tsy voatery ho mendri-piderana.
Androany aho dia nanontany Sharpminds. Iray amin'ireo olona tao amin'ny fivoriana, Linda Watts, natolony ny karany ary avy hatrany dia nitsiky ny tavako!
I Linda dia nanana fitambarana iray manontolo (ary koa endrika hafa tsy manam-paharoa), nifantoka tamin'ny teny fanalahidy sy andian-teny samy hafa ny andiany tsirairay, miaraka amin'ny mombamomba ny fifandraisany any aoriana! Tena mahavariana tokoa ny famoronana! Heveriko fa raha izaho ry bandy Wordle dia manakarama an'i Linda aho ary apetrako ho mpitantana ny fizarana karatry ny asa!
Linda dia Webmaster nandritra ny 9 taona lasa ary tena mahay mamorona, manan-talenta ary mafana fo. Nataoko an-tsaina izy fa ho geek - nanampy betsaka ny fampidirany an-dakilasy.
Izany no antony itiavako mampianatra ny Vahaolana BitWise Hetsika Sharpminds, mianatra zavatra betsaka avy amin'ireo mpanatrika rehetra aho ka mivoaka hoatran'ny hoe nahalala bebe kokoa noho izay nampianariko.
Manantena asa vaovao i Linda izao amin'ny maha Web, Web 2.0, ary Print Technology Coach azy. Azonao atao ny miantso azy hiantso hevitra sasany tany am-boalohany! Enga anie aho mba nieritreritra an'io hevitra io rehefa niresaka fisafidianana karatra fandraharahana ity herinandro ity! Tsy azoko antoka raha mitady asa maharitra i Linda - tokony hanontany ianao raha manana fotoana mety ho mpivarotra tranonkala mahay.
Tags: karatra fandraharahanatenifototratag cloudTags
Misaotra soa ho an'ny namana!
31 Jul 2008 amin'ny 10:13 PM
Misaotra an'ity Doug. Niverina nibitsika ny bitsikao tany am-boalohany aho satria tiako be izany. Nilalao niaraka tamin'i Wordle aho nandritra ny ora vitsivitsy, ary niverina niaraka tamin'ny rahona 3 hafa izay napetako teo amin'ny rindriko tany am-piasana.
Ankehitriny, heveriko fa mety misy fomba hafa mahafinaritra hafa hampiasana azy ireo.
Rehefa mieritreritra sary isika - dia tsy dia raisintsika ho herin'ny teny matetika ny herin'ny teny.
Ny sary iray dia mety mitentina teny an'arivony nefa ny rahona misy teny dia mety ho lehibe kokoa noho izay azonao lazaina ao amin'ny toerana kely amin'ny karatra fandraharahana!
Aug 1, 2008 amin'ny 7: 46 AM
Tsara izany, Lynn!
Aug 1, 2008 amin'ny 8: 51 AM
Misaotra anao tamin'ny fanamarihana mahafinaritra tao amin'ny bilaogy androany. Fomba ahoana hanombohana ny androko!
Niandry tao anaty boaty mailako ny karatrao maharitra rehefa tonga tany an-trano aho omaly. Handefa santionany aminao aho. Fantatro fa hanaitra anao ny kalitaon'ny Moo Fanontana.
Aug 1, 2008 amin'ny 9: 12 AM
Ary azoko atao ve ny manampy ny fahafinaretako tamin'ny fivoriana omaly. Nataonao mandinika ahy indray ny fampiasana ny bilaogy ary hampiasa azy io aho vokatr'izany.
Aug 1, 2008 amin'ny 9: 36 AM
Misaotra Linda! Vondron'olona marobe tonga nanatrika - izay manamora ny fanamorana izany hatrany.
1 Aogositra 2008 amin'ny 1:09 PM
Tokony ho tianao i Wordle. Nahaliana fa nahavita herinandro iray lasa teo ho an'ny tranokala loharanon-karenako "carte de crédit". Tiako ny zava-misy azonao atao ny manova ny loko fandokoana. Vato vato. Azonao jerena eto ny ahy http://cardsfreebusiness.com/
1 Aogositra 2008 amin'ny 1:18 PM
Nanampy ity iray ity tamin'ny fanangonana ahy
1 Aogositra 2008 amin'ny 3:38 PM
WOW, tena milay !!! Gaga be aho